Iwu nzuzo nke DataKit
ỌR D N'DLỌ EGO
Anyị (DataKit Studio) ghọtara nke ọma na ichebe ozi nkeonwe ma gbaa mbọ na-echekwa nzuzo gị. Nkwupụta Nzuzo nzuzo a na-ekpuchi mkpokọta, ojiji, ikpughere, njikwa na nchedo ozi nkeonwe gị nwere ike ịnakọta site na DataKit. Emewo ka emelite ya dika European General Data Protection Regulation (GDPR) chọrọ. Site na ị nweta weebụsaịtị anyị (www.ios-data-recovery.com) ma ọ bụ ịzụta ngwa desktọpụ anyị ('' Ngwa '', '' Ọrụ ''), ị kwenyere na Nkwupụta Nzuzo a na mgbakwunye na nkwekọrịta ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwe.
1. Nhazi data sitere na Datakit
1.1 Nhazi nke data nkeonwe metụtara ọbịbịa gị na webụsaịtị anyị na .zụ ihe
Dịka onye na - ekesa ngwanrọ (anyị bụ ndị mmekọ na MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout .etc), anyị anaghị anakọta ozi azụta maka ihe ọ bụla (Anyị na - anakọta adresị email gị mgbe ị na - ebuputa ngwa ngwa na nbudata ngwanrọ mgbe e mesịrị na arịrịọ email gị. nọ nchebe n’ebe anyị nọ ma ghara inweta ya maka ndị ọzọ). Mgbe Onye ọrụ zụtara ngwaahịa Datakit site na weebụsaịtị Weebụ 2Checkout ma ọ bụ MyCommerce, ụzọ abụọ a na-ere ahịa nke atọ mejupụtara nhazi nke data onwe onye dị ka ndị a:
1.1.1 Anakọtara data onwe onye
Banyere nhazi a, 2Checkout na MyCommerce na-anakọta data nkeonwe ndị a site na mpempe akwụkwọ nchịkọta na usoro ịtụ ma ọ bụ usoro ndị ọzọ.
Ozi iwu, dị ka ngwaahịa ị zụrụ, ụbọchị na ego ole enyere n'iwu;
Ozi ịkwụ ụgwọ dịka ozi kaadị akwụmụgwọ (ụdị, ọnụ ọgụgụ, ụbọchị ngafe, koodu nchekwa CVV) / ozi kaadị debit ma ọ bụ ozi ụgwọ / ịgba ụgwọ ndị ọzọ.
Nọmba nọmba ngwaahịa gị;
Ọdịnaya nke nkwukọrịta nkwado ndị ahịa.
1.1.2 Ebumnuche na usoro iwu maka nhazi
Datakit na-eji ozi anyị nakọtara gbasara gị maka ebumnuche ndị a:
Iji mee ka Datakit nye ndị ọrụ ya ngwaahịa (s) nke enyere n'iwu;
Maka ịrụ ọrụ nke nkwekọrịta nke Onye ọrụ na-eme ememme, dị na Ndenye 6.1.b nke GDPR yana data anakọtara dị mkpa iji wee nwee ike ịchọpụta ma gbaa ụgwọ onye ọrụ ahụ na iji ụgwọ nọmba kaadị akụ ya.
Maka inyocha njirimara gị na Inye ọrụ ma ọ bụ nkwado ndị ahịa;
Nyochaa ojiji nke weebụsaịtị na ngwaahịa anyị iji ghọta nke ọma otu esi eji ya ka anyị nwere ike imeziwanye ọrụ anyị yana ahụmịhe onye ọrụ ma soro ma jigide ndị ọrụ.
1.2 Kuki na traktọ
Mgbe Onye ọrụ na-ajụ weebụsaịtị na / ma ọ bụ ngwa ahụ, Datakit na-eme kuki ya na ndị ahịa ndị ọzọ na ngwa ọnụnụ.
Anyị na-eji Google Analytics, ọrụ nyocha weebụ site na Google, Inc. ("Google"). Nchịkọta Google na-eji kuki iji mee ka o kwe omume iji nyochaa weebụsaịtị gị. A na-ebufere ozi gbasara ihe anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị Kuki na-eweta site na sava Google na USA ma chekwaa ya. Agbanyeghị, tupu nke a emee, Google na - eme ka adreesị IP gị dị mkpụmkpụ ma kọwaa (usoro Google nke Google) ma ọ bụrụ na esonye na mpaghara otu European Union ma ọ bụ na mba ndị ọzọ na - azụ ahịa na nkwekọrịta na mpaghara European Economic Area. A na-ebugharị adreesị IP ahụ dum na sava Google na USA ma chekwaa ya n'ebe naanị mgbe ụfọdụ.
Nzuzo a na - eme ka a mata na adreesị IP gị enweghị ike idowe gị n'aka gị. Google ga-eji ozi a lelee ojiji ị na-edebe weebụsaịtị iji kpokọta akụkọ gbasara arụmọrụ weebụsaịtị maka Aiseesoft ma nye ọrụ ndị ọzọ metụtara websaịtị na ojiji Internetntanetị. Google nwere ike ịnyefe ozi a na ndị ọzọ, ebe okwesiri, ma ọ bụrụ na ọ nyere iwu n'iwu ma ọ bụ ọ bụrụ na Google na ndị ọzọ na-emekọrịta data a. Google agaghị ejikọta adreesị IP gị yana data Google ndị ọzọ. Site n'iji weebụsaịtị anyị, ị kwenyere n'ụzọ doro anya mkpokọta na nchekwa data nke Google n'ụzọ yana ebumnuche akọwara n'elu.
Also nwekwara nhọrọ igbochi Google inweta na ịhazi data nke kuki na data metụtara ojiji nke weebụsaịtị anyị (gụnyere adreesị IP gị) site na nbudata na wụnye ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị Google nyere.
2. Ingkpọtụrụ data
Ọ bụrụ na Onye ọrụ chọrọ ịkpọtụrụ datakit maka ebumnuche ọ bụla (gụnyere ịme ihe ọ bụla ikike ya na nchedo data dị ka esịpụrụ n'elu) biko kpọtụrụ support@ios-data-recovery.com.
Datakit ga-eme ihe na arịrịọ Onye ọrụ ma nye ozi na-akwụghị ụgwọ, belụsọ ebe arịrịọ ndị a na-edoghị anya na-enweghị isi ma ọ bụ karịa (ọkachasị n'ihi nhazigharị ha) nke dị na Datakit nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ ezi uche (na-eburu n'uche njikwa nchịkwa nke inye ozi ma ọ bụ nkwukọrịta, ma ọ bụ ime ihe achọrọ), ma ọ bụ jụ ime ihe arịrịọ ahụ.